Saddex arrimood oo ku saabsan Qudus iyo go'aanka laga filayo Trump - Worldnews.com
Saddex arrimood oo ku saabsan Qudus iyo go'aanka laga filayo Trump
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Qudus u aqoonsan doono in ay tahay caasimadda Israa'iil, sida ay ku warrameen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Trump.
Sidoo kale waxaa la
"daandaansi qayaxan oo ku wajahan Muslimiinta"
Waaxada arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in safaaradda cusub ee Mareykanka ee Qudus la furi doono bisha May ee soo socota. Furidda safaaradda ayaa ku soo...
"Nabadda Qudus" oo ku xiran wada hadal ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil
Baadariga ugu sareeya madaahibta Catholic-ga ee masiixiyadda, Pope Francis ayaa ku baaqay "nabadda Qudus" iyo wada hadal dhexmara Falastiin iyo Israa'iil. Isagoo...
Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ayaa sheegtay in "ururka u dhan yahay" in la taageero in Qudus ay caasimad u noqoto dowlad mustaqbalka ay Falastiin...
Gareowe Online 2017-12-12
Midowga Yuru oo Netanyahu ka diiday dalabka Qudus
Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa hoggaamiyayaasha dalalka Muslimiinta ku baraarujiyay in Qudus ay u aqoonsadaan in ay tahay "caasimadda xoogga lagu...
Halkan waxaa ku eegeynaa falanqeyn ku saabsan waxa laga qaadan karo siyaasadda Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil. Maamulka Trump oo rajo...
Afar Arrimood oo laga fahmay go\_'aankii Trump ee Qudus
Halkan waxaa ku eegeynaa falanqeyn ku saabsan waxa laga qaadan karo siyaasadda Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil. Maamulka Trump oo rajo geliyay Falastiin Bil ka hor, diblumaasi sare oo u dhashay Falastiin oo ku sugan Washington ayaa BBC-da u sheegay in uu aaminsan yahay in madaxweyne Trump uu ku guuleysan karo xalka Falastiin iyo Israa'iil,...
Dunida Muslimka oo dibadbaxyo uga jawaabtay go\_'aankii Trump ee Qudus
Xoogagga Israa'iil ee ku sugan deegaanada ay xoogga ku haystaan ee Daanta Galbeed ayaa ka hor tagaya Falastiiniyiin dibad baxayaal ah oo ka careysan go'aankii Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil. Dadka isu soo baxay ee Baytullaxam ayaa dhagxaan ku tuuraya ciidamada, waxaana loogu bedelayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya. Waxaa jiro warar aan la xaqiijin...
Mareykanka ayaa safaarad cusub ka furanaya magaalada Qudus, waa tallaabo ay so dhawaysay Israa'iil balse Falastiiniyiinta waxay samaynayaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan in safaaradda halkaasi lagu furo. Saraakiil sare oo ka socota Mareykanka ayaa ka qayb galaya munaasabadda xariga looga jarayo safaraadda Qudus kuwaaso ay kamid yihiin gabadha uu dhalay madaxweyne Trump ee...
Madaxweynaha Turkiga ayaa ka digay in dalkiisu uu xiriirka u jari doono Israa'iil haddii Mareykanku uu u aqoonsado Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tallaabdaasi ay Muslimiinta dunida uga dhigan tahay in Mareykanku uu khadka cas ka tallaabay. Dalal badan ayaa ka dalbaday Donald Trump inuusan qaadin tallaabadaasi. Waxaa jira warar...
Cinwaannada wargeysyada Carabta iyo Turkiga waxaa laga dhigay dhalleeceyn iyo xanaaq looga jawaabayo go'aanka Trump uu Qudus uga dhigay caasimadda Israa'iil. Wargeysyada ka soo baxa Israa'iil oo sidaa si ka duwan uga warramay waxay ammaaneen go'aanka madaxweynaha Mareykanka.'Halyey iyo taariikhi' "Waad ku mahadsan tahay madaxweyne go'aankan geesinimada ah ee taariikhiga ah....